Ukuprintwa kweNcwadi eyi-Hardware Printa-ukuprintwa kweencwadi e-China
Sivulekile kwaye sibuyisa imveliso ngexesha le-COVID-19 yentlekele. Siya kuprinta size sizise iimveliso zakho ngexesha. Wamkelekile kwi Sithumelele i-imeyile, enkosi.
Ulapha : Umphandle>zonke Products>Oluqinile Book Printing
Yintoni incwadi elukhuni? Iyaziwa ngamagama aliqela: ityala libotshelelwe, ukubuyisa, bathungelana ngentloko incwadi yokubopha kunye neqhina. Incwadi yethu elukhuni ibopha ngeglue kwaye i-stit, enokuthi ivuleke ngokufanelekileyo kwaye isebenze ixesha elide. Ukujikeleza umgogodla kunye nomqolo wesikwere kufakwa kwincwadi ye-hardcover esinokuyibopha.
Kutheni abantu bekhetha incwadi yabo njengencwadi elilukhuni? Esona sizathu siphambili ndicinga ukuba sikhangeleka sihle, yomelele kwaye yomelele. Unokuba nomfanekiso ngqondweni wombhali osebenze iminyaka ukubhala incwadi kwaye efuna ukuyiprinta njengobuchule, ukuyenza into yomqokeleli wonke umfundi. Inkampani yethu inokunceda wonke umntu aqonde eli phupha, Nokuba umsebenzi wakho unzima kangakanani, umzi-mveliso wethu unokucwangcisa ngomgangatho ogqibeleleyo, Njengomatshini bethu apha iseti enye iiseti eziphambili kuprinta iincwadi, kwaye sineqela elinamava.
Incwadi eluqweqwe elilukhuni ineengenelo ezininzi, abathengi banokukhetha isiciko sezinto ezahlukeneyo ngokwendlela abathanda ngayo. Njengokugubungela ngendwangu, isigqubuthelo sesikhumba, Ilaphu kunye nephepha elidityaniswe nesiciko njl. Uyilo lokhuselo olwahlukileyo unokukunceda ekutsaleni abafundi abaninzi.
Njengomzi mveliso wokushicilela ose-over 20 iminyaka yokuprinta amava sikhetha wena. Ngaphandle kwencwadi eluqweqwe olunzima sinezinye iintlobo ezahlukeneyo zokushicilela kunye neenkonzo zokubopha onokuzikhetha. Unokukhetha kwizinto ezinokukhethwa njengeencwadi eziboshwe kakuhle, iincwadi ezizibopha, incwadi yokubopha ehleliwe njl njl.
Incwadi yokuFoto yeKhompyuter ye-Hardcover kunye noGqityiweyo
Ukuprintwa kwenkonzo yokushicilelwa kweencwadi ezinemibala eqhelekileyo eChina
Ushicilelo olupheleleyo lweNcwadi yesiNtu esibonisa ukuPrinta kweTshayina
Inkonzo ephezulu yokuPrinta iNcwadi yokuPrinta yeNkonzo yase China
Incwadi Yogqithiso lweLeather Luxury enesitampu eshushu eshushu
Ukuprinta iNovel yoHlelo oluPhezulu lweNcwadi enqabileyo
Ingubo Yombhalo kwi-Hard Cover Photo Photo Kumgangatho wobungcali
UkuPrinta iNcwadi yokuPrinta ekumgangatho ophezulu ngamaxabiso amaxabiso aphezulu
Incwadi enemibala egqwethekileyo enomgangatho ophezulu
Ingubo yokuprinta i-Cloth Spine Hardcover Book Printa ngokuthe ngqo
Iinkonzo zokuziPhela zoThintelo lweNcwadi enobugcisa obuNgqongqo